I-Semalt Expert: Ukulungisa I-Issue of Self Referrals kwi-Google Analytics
Ngamanye amaxesha, isizinda somntu singabonakala kwingxelo yeGoogle Analytics njengenxalenye yendlela. Le ngxaki abaphuhlisi kufuneka bayilungise njengoko kungabangela iingxaki ngokunika ingxelo kunye nokunika idatha engathembekiyo. Ukuba umntu akayi kuphelisa umbandela wokubhenela, kunokukhokelela kwiinkcukacha ezithintekayo ezinokubangela ukuba kwenziwe izigqibo eziphosakeleyo kwimikhankaso yokuthengisa - largest long term care insurance companies. Ukongezelela oku, akunakwenzeka ukuthenga ityala lezentengiso ezanceda ukwanda kwamazinga okuguqulwa kwesiza.
Kwiimeko ezininzi, ingxaki ivela ngenxa yokungaphumeleli kwe-Google Analytics ukulungiselela ngokuchanekileyo, okanye ukuphunyezwa okungalunganga komnini wokongezwa.
UJack Miller, uMphathi weMathematika oPhezulu weMatriki we-12 (Semalt , uchaza apha izinto ezibangelwa zizathu kunye nendlela yokulungisa ngayo. Kwakhona, unikeza ukuhlaziywa kwe-analytics kwinqanaba lokunciphisa inani lokuzikhupha kwiziko.
I-traffic transfert iyinxalenye yesithuthi esifike kwindawo evela kwenye indawo. Kungaba ngohlobo lwekhonkco ukusuka kwenye idilesi. Amaqhagamshelo akufanele abe nayiphi na imiphumo yemikhankaso ngaphandle koko iya kuthathwa njengexesha lokuthumela ugaxekile. Ngokungafani nogaxekile, i-analytics iyayibona ngokuzenzekelayo apho ugaxekile uvela khona kwaye ibonisa amagama eedomeni eziyifakayo.
2. Amanqaku angenayo ikhowudi yokulandelela
Xa abantu belibale ukuthawula amaphepha abo, kuba nzima ukuzilandelela..Isiphumo kukuba abantu bafumana iipoleni zabo kwiphepha leengxelo.
Lungisa: qiniseka ukuba uquka ikhowudi yokulandelela kuwo onke amaphepha kwisayithi. Ukuba umntu akaqinisekanga ngesimo sesayithi, umhloli weTek uza kufika ngokufanelekileyo.
3. Amaphepha Ukulahla Iinkcukacha zeCokie
Icookie ye-Universal Analytics ifanele ifake xa ixhuma phakathi kwamaphepha. Ukuba elinye iphepha liwisa ikhukhi ngesizathu esithile, iseshoni iphelile. Ngenxa yoko, i-cookie entsha iqala ukudala iseshoni entsha. Omnye kufuneka aqiniseke ukuba bahlola onke amaphepha okuhlawula afunde apho ukuzithumela kubakho kusetyenziswa ukusebenzisa isixhobo sesekondari.
Misela: Hamba kumaphepha ukuze wazi apho umcimbi uqala khona nokuba kutheni. Emva kokuba umthuthukisi eyazi isizathu sokuba yingxaki, kuba lula ukujolisa kuyo. Ukuba ukulungiswa kufike kulula, ke uye phambili kwaye uyilungise. Ukuba kunzima, umntu kufuneka afake umqhubi omele aqonde kakuhle ukubaluleka kokusombulula ingxaki kwaye avumele ukuba balungiselele egameni.
4. Iziqendu ze-cross
Ezinye iinkampani zinokuba neengingqi ezininzi, kwaye ngamanye amaxesha zifumana isidingo sokudibanisa umsebenzi weentengiso kwiintlobo zazo. Ukuba kwenziwe ngokufanelekileyo, kufuneka baqinisekise ukuba ikhukhi yangempela ihlala ihlala ihleli. Ukuqhagamshelisa ngokufanelekileyo le mimandla yindlela yokuhamba.
Hlela: Qinisekisa ukuba zonke ii-cookies zihlala zihlala zihlala kwiindawo.
5. Iseshoni Isikhathi sokugqibela
Xa iseshoni iphelelwa emva komzuzwana othile, iseshoni entsha iqala. Kukholelwa ukuba kudala idatha entsha yedatha.
Misela: Omnye unokusetha umda wexesha kwiseshoni ukuya phezulu aze abone impembelelo enokuzimela.
Uluhlu lokungabandakanywa kokudluliselwa kokungeniswa luluhlu olulodwa olukunceda ukujamelana nombandela wokuzithumela ngqo.